हाइ स्कोरिंग रोमान्चक खेलमा कुवेतद्वारा कतार पराजित, नेपाललाई फाइदा कि घाटा ? – WicketNepal
हाइ स्कोरिंग रोमान्चक खेलमा कुवेतद्वारा कतार पराजित, नेपाललाई फाइदा कि घाटा ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ श्रावण १०, शुक्रबार ११:३९
निकै रोमान्चक हाइ स्कोरिंग खेलमा कतारलाई कुवेतले १० रनले पराजित गर्दै टि-२० विश्वकप छनौट एसिया फाइनलमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ।
कतारको लागि कप्तान तमुर सज्जादले अविजित ४६ रन तथा नौमन सरवारले अविजित ३४ रन बनाए पनि जित दिलाउन सकेनन्। सरवारले २० बलमा ६ चौका र १ छक्का तथा सज्जादले ३२ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे।
कतार एक समय १५.३ ओभरमा १२८/५ को अवस्थामा थियो। अन्तिम २ ओभरमा ४५ रन आवस्यक हुँदा नौमन सरवारले १९ औं ओभरमा ३ चौका प्रहार गरेका थिए। अन्तिम ओभरमा जित्न ३१ रन आवस्यक हुँदा ओभरको पहिलो ३ बलमा चौका, चौका र छक्का प्रहार गर्दै नौमन सरवारले जित दिलाउने प्रयास गरेका थिए।
अन्तिम ३ बलमा १६ रन आवस्यक रहेको बेला कुवेत बलर मोहम्मद एहसानले चौथो र पाँचौ बलमा मात्र १/१ रन दिएका थिए। अन्तिम बलमा सरवारले चौका प्रहार गरे पनि १० रनले हार बेहोर्न बाध्य भयो। कुवेत बलर शैराज खान र जनदु हमुदले २/२ विकेट लिए।
सिंगापुरको इन्डियन एसोसीएसन मैदानमा सम्पन्न खेलमा टस हारेर ब्याटिंग गरको कुवेतले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १९७ रन बनाएको थियो। उसको लागि प्लेयर अफ द म्याच समेत चुनिएका अद्नान इद्रेसले सर्वाधिक ५६ रन बनाउन मात्र ३२ बलमा ८ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। यस्तै कप्तान मुहम्मद कासिफले ३० बलमा ५ छक्का र १ चौका मदतले ४३ रन बनाए। ओपनर मित भाभसारले ३५, आर सान्दारुवानले २६ तथा उस्मान वाहिदले अविजित १८ रन बनाए। कतार बलर नौमन सरवार र इकबाल हुसेनले २/२ विकेट लिए।
अंकतालिका यस्तो छ , अब विजेता बन्ने समीकरण यस्तो
प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले भोलि शनिवार कुवेतसंग खेल्नेछ। अब जित्ने पर्ने खेलमा कुवेतसंग पनि नेपाल डराउनु पर्ने अवस्था भएको छ। किनकि कतारलाई नेपालले पराजित गरेको थियो जसलाई कुवेतले पराजित गरे पछि अब नेपाल ढुक्क हुने अवस्था रहेको छैन।
प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा मलेसियासंग ४२ रनले पराजित भएको कुवेतले सिंगापुरसंगको खेल बर्षाले हुन नपाउदा १ अंक बाड्नु परेको थियो। तेश्रो खेलमा जित संगै २ अंक साथ प्रतियोगिताको अंक तालिकामा कुवेत ३ खेलमा ३ अंकको साथ दोश्रो स्थानमा उक्लेको छ। पहिलो स्थानमा रहेको सिंगापुरको २ खेलमा १ जित र १ बराबरी अंक सहित समान ३ अंक रहेको छ र नेट रन रेटमा अघि रहेको छ। सिंगापुरको नेट रन रेट १.६५ रहेको छ भने कुवेतको -०.८ रहेको छ। अंक तालिकामा नेपाल २ खेलमा १ जित र १ हार सहित चौथो र मलेसिया पनि समान नतिजा सहित नेट रन रेटमा नेपाललाई पछि पार्दै तेश्रो स्थानमा रहेको छ।
आजै दोश्रो खेलमा सिंगापुर र मलेसिया प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकोले त्यस खेल पछि नेपालको लागि विजेता बन्ने समीकरण व्याखा गर्न अझ सजिलो हुनेछ।
अब बाँकी खेलहरु
आज – सिंगापुर VS मलेसिया
नेपालको लागि अब सहजै विजेता बन्नको लागि २ खेल जित्नु पर्नेछ भने मलेसियाले खेल्न बाँकी २ खेलमा १ खेल हारे पुग्छ।
यदी नेपाल र मलेसियाले बाँकी दुवै खेल जित्यो भने नेपाल/मलेसियाको ६/६ अंक हुनेछ र नेट रन रेटमा विजेता टिम तय हुनेछ। अहिले मलेसियाको नेट रन रेट नेपालको भन्दा निकै राम्रो ( नेपालको ०.१२३ र मलेसियाको १.०९१ ) रहेकोले मलेसियासंग अंक बराबरी भए नेपाल नेट रन रेटमा पछि पर्न सक्छ।
कुवेतसंग पराजित भए पछि कतारको भने विश्वकप पुग्ने सम्भावना अब मुस्किल बनेको छ। अब कतारले मलेसियासंग १ खेल खेल्न बाँकी रहेको छ जुन खेल जिते पनि कतारको मात्र ४ अंक हुनेछ। नेट रन रेट पनि -०.५९६ रहेकोले अब कतारको विजेता बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ।
आयोजक सिंगापुर सहित नेपाल, कतार, कुवेत र मलेसिया सहभागी प्रतियोगिताको विजेता टिमले अक्टोबरमा युएईमा आयोजना हुने टि-२० विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्न पाउनेछ।